doubleTwist loo texgelinayaa inuu yahay qalab wax lagu maareeyo music weyn, caawinta aad u hagaagsan Lugood music, video iyo sawiro si telefoonka aad Android oo kiniin ku haboon. Waxaa la socon kara Windows PC iyo Mac, oo ay Android version - doubleTwist AirSync si fiican u shaqaynayaan. Waxaad tegi kartaa website-ka rasmiga ah inaad kala soo baxdo aad doonayso version. Ka sokow, waxa aad bixisaa laba siyaabood in ay ku xidhmaan. Mid ka mid ah waa via cable USB ah, oo kale oo ay ka badan tahay WiFi. Download doubleTwist in ay isku day ah >>
Si kastaba ha ahaatee, ma taageeri Android 4.3 iyo ka dib markii in ka badan aad ku xidhan cable UBS ah. Xitaa waa la jaan qaada OS aad Android, waxaa inta badan ku guuldareysto inuu u aqoonsadaan. Inkasta oo aad ku xidhan karto in ka badan WiFi, ma ahan lacag la'aan ah. Waa hagaag, haddii aad ka daaleen doubleTwist oo aad rabto kale ah, waxaad u timid inaad meel sax ah. Halkan waxaa kale oo sare 5 doubleTwist u PC iyo Mac.
1. Wondershare TunesGo u Android Mac, 17.65M
2. SyncMate Mac, 48.9M $39.95 Via cable USB, WiFi, Bluetooth
3. iSyncr Mac: 2 Milyan
4. Samsung Kies Mac, 30.9M
Windows: 174M Free Via cable USB, WiFi
Wondershare TunesGo (Mac) ama Wondershare TunesGo (Win) waa ka duwan oo awood leh si doubleTwist Mac. Waxa sameyn kara waxa kartaa doubleTwist. Waxay ka caawisaa si ay u hagaagsan Lugood in Android, Android inay Lugood iyo Mac in ay Android aan ka kaaftoomi kasta.
Hagaagsan maktabadda oo dhan Lugood ama music soo xulay, playlists, podcasts, Lugood U iyo TV muujinaysaa ka Lugood in Android.
Bedelka music Android, playlists iyo videos oo dheeraad ah si ay u Mac / Lugood ee 1 click.
Jiid oo hoos u photos, music, playlists, filimada, iwm ka Mac / PC in Android.
U dayactir ID 3 tags iyo nadiifinta songs nuqul in Lugood.
La jaan qaada Android 2.1 iyo ilaa.
Taageerada ka badan 2000 qalabka, sida Samsung, Sony, Google, Huawei, LG, HTC, Motorola, iyo in ka badan.
SyncMate ah fursad kale oo doubleTwist u Mac. Waxay leedahay 3 jidadkooda xiriir: via cable USB, WiFi, iyo Bluetooth. Waxaa aad u ogolaanaya SMS u hagaagsan, jadwalka taariikhda, xiriirada, wicitaanada, galalka, Bookmarks Safari, iPhoto iyo Lugood dhexeeya Mac iyo Android
Nidaameed SMS, xiriirada iyo kalandar ka Android inay Mac lacag la'aan ah.
Photos nidaameed iyo fayl ka mid ah oo ay taageerayaan qalab Android. (Lacag)
Maamul SMS iyo wac taariikhda. (Lacag)
Buur qalab Android sida drive dibadda adag tahay in dhirtuba files waxa on. (Lacag)
Bookmarks nidaameed iyo xusuusinayaa on qalabka oo dhan. (Lacag)
Fiiro gaar ah: Its user interface ma fududa in la isticmaalo. Waxay u baahan tahay Mac OS X 10.8 iyo ka dib.
iSyncr waa software ah u hagaagsan oo khafiifa. Sida doubleTwist, waxa ay leedahay 3 qeybood oo loogu talagalay PC, Mac iyo Android. Waxaad u hagaagsan karaa Lugood playlists qalabka Android via WiFi ama cable USB. Si kastaba ha ahaatee, la isticmaali karaa marka Samsung Kies waxaa lagu rakibay on your computer.
Samsung Kies waxaa freeware soo saartay Shirkadda Samsung. Waxaa awoodo gurmad iyo soo celinta content on qalabka Samsung aad, wareejin iyo maarayn music, video iyo sawiro ku saabsan qalabka Samsung aad. Waxaa xitaa kuu ogolaanayaa inaad u cusboonaynta firmware ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay si fiican u ma yeelin oo xidhiidh ah. Users badan oo ku saabsan ka cabato.
3 Siyaabaha Connect Android inay Mac
2 Methods si ay u gudbiyaan iTuns Music inay HTC
Khamaar 3 iSyncr lagu bedelan karo
2 Siyaabaha dhaqaaq Music ka Mac si ay Android
A Guide Full si ay u gudbiyaan Lugood in Android
Khamaar 3 Altenatives in SyncMate
3 Hababka in aad nuqulka Lugood Music in Samsung
Bedelka Lugood Music inay Nexus 5/10/4/7
Nidaameed Faylal ay ka Mac si ay Android
> Resource > bedelan karo > Top 4 lagu bedelan karo doubleTwist u Mac iyo PC